के केराको बोक्राले पनि फाइदा गर्छ ? - तितोपाटी
के केराको बोक्राले पनि फाइदा गर्छ ?
तितोपाटी – केराको बोक्रा छालादेखि मोटोपना कम गर्नका लागि निक्कै उपयोगी हुने गरेको तथ्यले देखाएको छ । केराको बोक्रामा फाइबरको मात्रा बढी हुन्छ । यदि तपाई दैनिक एक केराको बोक्रा खानु हुन्छ भने एक महिनामा तपाईको तौल दुईदेखि तीन किलोसम्म कम हुन्छ ।
केराको बोक्रामा दुई प्रकारका फाइबर हुन्छन्, सोल्यूबल र इन्सोल्यूबल, जसले शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रालाई कम गर्छ ।यदि तपाईको आँखाको ज्योति कमजोर भएको छ र चश्मा लगाउनुहुन्छ भने केराको बोक्रा खानुहोस् । केराको बोक्रामा ल्यूटिन हुन्छ, जसले आँखाको ज्योतिलाई बढाउँछ ।
केराको बोक्रामा पाइने ‘सेरोटोनिन’ले तपाईलाई राम्रो महशुस गराउँछ । ‘युनिभर्सिटी अफ ताइवान’को अध्ययन अनुसार, तीन दिनसम्म दैनिक दुई वटा केराको बोक्रा खानाले शरीरमा सेरोटोनिन हर्मोनको मात्रा १५ प्रतिशत बढेर जान्छ । जसअनुसार मान्छेको खराब मुडलाई अन गर्न मद्दत गर्छ ।
यदि तपाईलाई राम्रो निन्द्रा नलाग्ने समस्या छ भने केराको बोक्रा खानुहोस् । केराको बोक्रामा पाइने ट्रिप्टोफेन नामक एक रसायनले राम्रो निन्द्रा ल्याउन मद्दत गर्छ ।हरियो केराको बोक्रा बढी फलदायी मानिन्छ । केराको बोक्राले शरीरमा रातो रगतको कोशिकालाई टुक्रिनबाट रोक्छ । तर पहेँलो केराको तुलनामा हरियो केराको बोक्रा फलदायी हुन्छ । केराको बोक्राले रगत सफा गर्नका साथै कब्ज्यतका बिरामीलाई पनि राहत दिन्छ । यदि केराको बोक्रालाई अनुहारको छालामा घोट्ने हो भने यसले छालालाई नरम बनाइ राख्छ ।
July 10, 2018 3:29 pm | स्वास्थ्य